Posted by ဦးသိန်းဝေ at 11:39 PM No comments:
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 11:34 PM No comments:
၅။ အရေအတွက် ငါးပါး ရှိသောကြောင့် “ပဉ္စသီလ”။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 11:27 PM No comments:
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 11:10 PM No comments:
၄။ မုသာဝါဒ = မဟုတ်မမှန် ပြောဆိုခြင်း။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 11:09 PM No comments:
"ဘာသာ မပျောက်အောင် သာသနာပြုနိုင်ခဲ့သည့် စူဠသုဘဒ္ဒါ"
စူဠသုဘဒ္ဒါဆိုသည့် သာသနာ့အာဇာနည် အမျိုးသမီးသည် အနာထပိဏ်သူဌေးကြီး၏ သမီးတစ်ဦးပါ။ ဘာသာခြားနှင့် အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ပေမယ့် ဘာသာမပျောက်သည့်အပြင် သာသနာကျယ်ပြန့်အောင် သာသနာပြုနိုင်ခဲ့သည့် သာသနာ့အာဇာနည် မြတ်စွာဘုရားတပည့်အစစ်ပါ။ ယခုခေတ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း၊ အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိန်းကလေးတိုင်း အတုယူသင့်သည့် စံနမူထားသင့်သည့် အမျိုးသမီးပါ။ အနာထပိဏ်သူဌေးမှာ ကျောင်းနေဖက် ဘာသာခြား သူငယ်ချင်း ဥဂ္ဂသူဌေးဆိုသူ ရှိပါတယ်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 1:49 PM No comments:
သုခေါ ဗုဒ္ဓါန မုပ္ပါဒေါ
သုခါ သဒ္ဓမ္မ ဒေသနာ။
သမဂ္ဂါနံ တပေါ သုခေါ။
ဗုဒ္ဓါနံ= သဗ္ဗညုဗုဒ္ဓ အမည်ရသည့်လော
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 11:03 AM No comments:
ကြားဖူးတာလေး တစ်ခုက… သားသတ်လိုင်စင်ရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဟာ သတ်ဖြတ်နေရင် စီးပွားတွေ တက်နေပြီး မကောင်းမှန်းသိလို့ အခြားသမ္မာအာဇီဝ အလုပ်လုပ်ရင် စီးပွားတွေ ကျပါသတဲ့။
ချမ်းသာတာဟာ အတိတ်က ကောင်းမှုကြောင့်ဆိုရင် ပစ္စုပ္ပန်မကောင်းမှုက အတိတ်ကောင်းမှုကို ထောက်ပံ့လို့ ချမ်းသာတာလား။ မဟုတ်ပါဘူး။ နှိပ်စက်လို့ ချမ်းသာတာပါ။
စာရေးသူသည် နိုင်ငံကိုချစ်သလို သာသနာတော်ကိုချစ်သည်။ စာရေးသူကဲ့သို့ပင် နိုင်ငံနှင့် သာသနာကို ချစ်သူတွေ ဒုနှင့်ဒေး ရှိနေပါလိမ့်မည်။ သို့ ရာတွင် နိုင်ငံချစ်သူက ”ဒို့ ကနိုင်ငံကိုချစ်သည်ဟေ့” ဟု လက်သီး လက်မောင်းတန်းအော်နေရုံနှင့် မပြီးသလို သာသနာကိုချစ်လှပါသည်၊ မြတ်နိုးလှပါသည်ဟု တဖွဖွ ဆီမန်းမန်းနေရုံနှင့် မဖြစ်ပါ။ တကယ်ချစ်ရာရောက်အောင် အလုပ်လုပ်ကြဘို့ လုံးဝလိုအပ်ပါသည်။ သာသနာရိပ်တွင် ခိုလှုံနေကြသော သာသနာ့ဝန်ထမ်းများအဖို့ ပို၍အလုပ်လုပ်ကြရမည်မှာ အထူးပင် ပြောနေရန် မရှိပါ။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 9:21 AM No comments:
ရဟန်းတို့ အင်္ဂါရှစ်မျိုးတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ရဟန်းအား …
အလိုရှိကုန်လတ်သော် ဥပါသကာတို့သည် မကြည်ညိုမှုကို သိစေရာကုန်၏။
၁။ လူတို့အား လာဘ် မရစိမ့်သောငှါ အားထုတ်၏၊
၂။ လူတို့အား အကျိုးမဲ့ ဖြစ်စိမ့်သောငှါ အားထုတ်၏၊
၃။ လူကို ဆဲရေး၏၊ ရေရွတ်၏၊ (ခြိမ်းခြောက်၏)၊
၄။ လူအချင်းချင်း ကွဲပြားစေ၏၊
x ဧည့်သည်အဖြစ်၊ ခေတ္တရောက်လာ
x သူသူငါတို့၊ လာရာလမ်းကြောင်း
x ကောင်းခဲ့၍သာ၊ လူဖြစ်လာရ....၊
x “ဘ၀သမိုင်း၊ မရိုင်းစေရ
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 9:14 PM No comments:
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 8:56 PM No comments:
ကပ်ကြီး ၃ ပါး ကင်းလွတ်အောင်။
ကပ်ကြီး ၃ ပါး ကင်းလွတ်စေရန် စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကတော့ လူတိုင်းကိုယ်စီ
ငါးပါးသီလ မြဲကြဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
၁။ ပါဏာတိပါတ သိက္ခာပုဒ်ကို လုံခြုံအောင် စောင့်ထိန်းသွားပါလျှင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး
ညှင်းဆဲသတ်ဖြတ်နေတဲ့ သတ္ထန္တရကပ်ဆိုးကြီး မကျရောက်အောင် ကာကွယ်ရာ ရောက်ပါတယ်၊
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 8:51 PM No comments:
အရိယာတပုဿနှင့် ရဟန္တာအရှင်မြတ်ဘလ္လိက ညီနောင်။
စဉ် ဖူးတွေ့ခွင့် ကြုံခဲ့၏။ ဘုရားရှင်အား မုန့်ကြွပ်ကျစ်နှင့် ပျားဆုပ်မုန့်များ လှူဒါန်း၏။ သောက်တော်
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 8:27 PM No comments:
လူကြီးတွေက ကလေးတွေကို ကော်ပတ်ရုပ်ထင်၍ နေကြကုန်၏။
လောကကြီးမှာ လူ၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါတွေ အကျိုးစီးပွါးဖြစ်ဖို့၊ လူ၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါ
တွေ ချမ်းသာဖို့၊ လူ၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါတွေ ကောင်းကျိုးရဖို့ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာ
သုံးပါး ပွင့်ပေါ်လာတာ။ ဘုရားကြည်ညို၊ တရားကြည်ညို၊ သံဃာကြည်ညိုတယ် ဆိုရင် ကိုယ့်မိ
သားစု ငြိမ်းအေးမှုကို ကိုယ်လုပ်ပေးနိုင်ပြီလား?။ အဲဒါလေးကို ပြန်ဆန်းစစ် ကြည့်စမ်းပါ။ အခု
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 8:21 PM No comments:
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 10:19 AM No comments:
မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် စောစောစီးစီး ထတော်မူ၍ အလုပ်အကျွေး ရဟန်းတော်အား ချီးမြှောက်ရန် ရူပကာယကိုယ်တော် ချမ်းသာရန်အတွက် မျက်နှာတော်သစ်ခြင်း အစရှိသော ကိုယ်လက်သုတ်သင်မှုကို ပြုတော်မူပြီးလျင် ဆွမ်းခံဝင်ချိန်ရောက်သည့်တိုင်အောင် ဆိတ်ငြိမ်ရာအရပ်၌ ဖလသမာပတ်ဖြင့် အချိန်ကို ကုန်လွန်စေတော်မူ၍ ဆွမ်းခံချိန် ကျရောက်သောအခါ သင်းပိုင်ကို ပြင်ဝတ်၍
“နောက်တစ်ခါ လူလာဖြစ်ရင် …..”
တစ်ဘ၀နဲ.ပြီးမှာ မဟုတ်ဘူးနော်၊ ပြီးတော. ကျင်.နည်းကလည်း
သာသနာနဲ.ကြုံမှ ၊ တို.က သာသနာရှိနေတုန်း တခြားရောက်နေရင်
ဒီနည်းသည် တို.နဲ.မဆိုင်၊ သာသနာတို.နဲ.မဆိုင်ဖြစ်သွားမယ်နော်။
အရူပဘုံ၊ ရူပဘုံဆိုတဲ့နေရာမျိုး. တစ်ဖက်သတ်အကျင်.နဲ.ရောက်သွားရင်လည်း
တို.သာသနာနဲ.လွဲမှာနော်၊ သာသနာက နှစ်ထောင်.ငါးရာကျော်ပြီလေ၊
သြကာသနဲ့ဘာကြောင့် ကန်တော့ရသလဲ
သြကာသ ဆိုတာ ခွင့်ပေးပါလို့ခွင့်တောင်တာ၊ အပြည့်အစုံဆိုရင်…
သြကာသံ ဒေထ၊ သြကာသံ ဒေထ၊ သြကာသံ ဒေထ လို့ဆိုရမယ်။
ခွင့်ပေးတော်မူပါ ဘုရား လို့သုံးကြိမ်တောင်းပန်တာကလား။
ဘာလို့ ခွင့်တောင်းရတာတုန်းလို့မေးကြည့်။
တပည့်တော်တို့ကိုယ်နှုတ်စိတ်ထား သုံးပါးများနဲ့ ပြစ်မှားမိခဲ့ တဲ့ 
အပြစ်ဟူသမျှတို့ ကို ပျောက်ကင်းစေချင်လို့ ပါဘုရားလို့ 
တဲ့ သူ့ဆီကပညာတွေက သူလိုချင်တဲ့အကျိုးကို မပေးစွမ်းနိုင်ပါ။ ပေးနိုင်စွမ်းမရှိလို့ တရားဓမ္မကို
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 11:55 PM No comments:
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 11:46 PM No comments:
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 11:05 PM No comments:
ခြောက်မြှောင့် ရွေ့သော ငရဲ။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 10:38 PM No comments:
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 2:25 PM No comments:
တကယ် ဥပုသ်ရ မရ ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးနည်း
ဒီကနေ့ ဥပုသ်နေ့ဘာသီလတုန်း … ဥပုသ်တော် သီလ။
နေ့ တိုင်းငါးပါးသီလ .. ဒီကနေ့ဥပုသ်နဲ့ သီလ တွဲတယ်။
အဲတော့ ဘယ်နယ်တုန်း.. သီလစောင့်ရုံပဲလား.. ဥပုသ်ကော ယူမှာလား။
ဥပုသ်က ဘယ်သွားယူမတုန်း.. ရှောင်ကြဉ်တာက သီလဗျ…။
သီလက ကိုယ်နဲ့ နှုတ်နဲ့ ကို တာဝန်ယူတယ်..
ဥပုသ်က စိတ်ကို တာဝန်ယူတယ်ဗျ။
ဥပုသ်က စိတ်နဲ့ ဆိုင်တယ်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 12:05 PM No comments:
ကြည်ညိုစရာ အကောင်းဆုံး သာဝတ္ထိရွှေပြည်
သာဝတ္ထိမှာ ဝေနေယျတွေဟာ ဘုရားမှန်း တရားမှန်း
သံဃာမှန်းသိသိနဲ့ဘုရားစကား တရားစကား
အဲ့ဒီတုန်းက သာဝတ္ထိမှာ လူဦးရေ (တစ်ကုဋေ)လောက်ရှိတဲ့အထဲမှာ
သုံးပုံနှစ်ပုံ ခုနစ်သန်းခွဲကျော်ဟာ အရိယာတွေချည်းပဲလို့ ဆိုတယ်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 12:04 PM No comments:
တန်ခိုးသည် ဖုံးထားရသော အရာ၊ ပညာသည် ဖွင့်ဖော်ထားအပ်သော အရာ
အဲဒီတုန်းက ရာဇဂြိုလ် သူဌေးကြီးဟာ ရတနာသုံးပါး အပေါ် သံသယအားကြီးနေတယ်။
လောကမှာ ဘုရားရဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုပြီး ဂိုဏ်းဆရာကြီးတွေ လုပ်နေကြတယ်၊ တကယ့်ဘုရား
ရဟန္တာဆိုရင် သိသာထင်ရှားတဲ့ တန်ခိုးပြရမှာပေါ့လို့သူဌေးကြီးတွေးထင်နေတယ်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 12:02 PM No comments:
ကုသိုလ်ကောင်းမှု ပြုလုပ်ပြီး အမျှအတမ်းပေးဝေခြင်းအကျိုး။
ကုသိုလ်ကောင်းမှု ပြုလုပ်ပြီး အမျှအတမ်း ပေးဝေတာကို မြတ်စွာဘုရားက “ဉာတိဓမ္မ”
ဆွေမျိုးတွေ လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့် ၀တ္တရားအဖြစ်ဖြင့် ဟောထားတာဖြစ်လို့ လုပ်သင့်လုပ်
ထိုက်တဲ့ကိစ္စ၊ အကျိုးရှိတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရင် ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတယ်။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 6:57 AM No comments:
ဒါန်းပူဇော်ထားရမည်။ ညည့်အခါဖြစ်လျှင် ဆီ(လျှပ်စစ်)မီးတွေ ထိန်လင်းအောင် ညှိထိန်းထားရမည်။
သားကောင်းရတနာ၊ သမီးကောင်းရတနာတွေ ရအောင် ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ယူနည်း။
ဦးဇင်းတို့အမေ မှားခဲ့တာတစ်ခု ရှိသတဲ့။ ဦးဇင်းတို့ ငယ်ငယ်တုံးက ပြောပြီးပြီ။ အရက်မ
သောက်တတ်ဘူး၊ ဆေးလိပ်မသောက်တတ်ဘူး ပြောသလိုပဲ၊ ဖဲမရိုက်တတ်ဘူးလို့ ..မပြောလိုဘူး။
ကို ကြည့်ပြီးတော့၊ အမေက ဘာပြောတယ်ဆိုတော့၊ အိုး ....“ငါ့သား, ငါ့သား” ငါ့သားဖဲရိုက်တတ်
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 10:18 PM No comments:
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 9:30 PM No comments:
မနက် အိပ်ရာနိုးနိုးချင်း နိုးပြီဆိုတာကို သိတဲ့စိတ်ကလေး ၀င်လာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းပဲ
အာနာပါန အားထုတ်ပါ။ အသက်ကို ၀အောင် ရှူလိုက်လို့ ရှိရင် ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အောက်ဆီဂျင်
ပိုပြီးတော့ ရလာတယ်။ ဦးနှောက်ဟာ အောက်ဆီဂျင် အများကြီးလိုတယ်။ အိပ်ရာနိုးနိုးချင်း
အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်နေချိန် မကြည်မလင်ဖြစ်နေချိန်မှာအာနာပါနကို အားရပါးရအားထုတ်လို့ 
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 10:07 AM No comments:
“ဧဟိပဿိကော-လာပါ စုံစမ်းပါ တကယ်လက်တွေ့ လုပ်ကြည့်ပါ”
ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဟာ သုတမယ၊ စိန္တာမယလောက်နဲ့ တင်
ရပ်ထားလို့ မရဘူး။ ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်လည်း
သုတမယ၊ စိန္တာမယလောက်နဲ့ရှိခဲ့တုန်းက ကိုယ့်ဟာကိုယ်
တော်တော်သိပြီလို့ ထင်ခဲ့တာ၊ တရားအားထုတ်ကြည့်လာတဲ့အခါမှာ
ကိုယ့်ဥာဏ်နဲ့ ကိုယ် သိလာတဲ့အခါမှာ သုတမယ၊ စိန္တာမယနဲ့ 
ဘာဝနမယဥာဏ်ကြားမှာ ခြားနားမှု ဘယ်လောက်ကြီးကျယ်သလဲ
ဆိုတာ ပို သိရတယ်။
တစ်နေ့ လုပ်တဲ့ အားနဲ့ အတူတူ။ တို့ ရဟန်းမှာ တစ်ထပ်နဲ့ 
တစ်နေ့ စာကို စားရပါတယ်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 10:05 AM No comments:
+ နေ့တစ်နေ့ အစ၊ နံနက်ထလျှင်
+ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ရတနာသုံးပါး
+ ငါးပါးအနန္တ၊ ကန်တော့ကြ၍
+ သရဏဂုံတည်၊ သီလဆောက်ကာ
+ မေတ္တာပို့ခြင်း၊ ခံယူခြင်းနှင့်
+ ထိခြင်းငါးပါး၊ ဦးညွှတ်တွားလျက်
လူတွေက မိမိရဲ့ ရုပ်ခန္ဓာကိုယ် မလှ,လှအောင်၊ မ၀,၀အောင်ဆိုတာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ပြင်နေကြ
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 8:24 PM No comments:
ငရဲဘုံဆိုတာကို ပါဠိလို “နိရယ” လို့ ခေါ်တယ်။ “နိရ်” ဆိုတာက မရှိဘူး၊ “အယ” က ချမ်း
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 8:19 PM No comments:
ကျန်းမာရေးထောက်ပံ့မှုဟာ ပရဟိတအလုပ်တွေ၊ အများကို ကူညီဆောင်ရွက်ပံ့ပိုးစောင့်ရှောက်
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 8:14 PM No comments:
၄။ စာဂ = ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်း။
ဘွဲ့တံဆိပ်ပေါင်း ၄၃ ဘွဲ့ရတိပိဋက ဆရာတော်
ဓမ္မာစရိယ (၉)ဘွဲ့၊ ပါဠိပါရဂူဘွဲ့၊ဝိဒူ(၅)ဘွဲ့၊ မဟာဝိဒူ(၄)ဘွဲ့
နှင့် အခြားအစိုးရ တိပိဋကဆိုင်ရာဘွဲ့များ အပါအဝင် ဘွဲ့တံဆိပ်ပေါင်း (၄၃)ဘွဲ့ရ
တိပိဋကဓရ တိပိဋကကောဝိဒ ဆရာတော် အရှင်အဘိဇာတာဘိဝံသ
ဆရာတော် အရှင် အဘိဇာတာလင်္ကာရာဘိဝံသသည် (၆၂)ကြိမ်မြောက် တိပိဋက ရွေးချယ်ပွဲ စာမေးပွဲတွင် (၁၂)ပါးမြောက် 'တိပိဋကဓရတိပိဋကကောဝိဒ' ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ကို ရ ရှိအောင်မြင်တော် မူခဲ့သည်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 11:44 AM No comments:
*** ၀ိသာခါကို သူ့မိဘများမှာကြားလိုက်သော စကား(၁၀)ခွန်း ***
၁) အိမ်တွင်းမီး အပြင်မထုတ်ရ
၂) အိမ်ပြင်မီး အတွင်းမသွင်းရ
၄) ပြန် မပေးမဲ့သူကို မပေးနဲ့။
၅) ပေးသင့်သူကိုလည်း ပေး။
မြဘုရား ကျောင်းသည် ဆူကိုထိုင်း ခေတ် AD- 1438 ကပင် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရှိနေခဲ့သည်။
ထိုင်းရာမ ဘုရင် ၁ (1782-1809) သည်။ AD- 1782 တွင် လာအိုနိုင်ငံ ဗီယင်တိန်းမြို့မှ ရရှိသော မြဘုရားကို သူ၏နန်းတော် ဘန်ကောက်မြို့တော်အတွင်း တစ်ပါတည်း တည်ဆောက်ခဲ့လေသည်၊
မြဘုရားသည် ကြီးမားသော ကျောက်စိမ်းတုံးမှ ထုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်လေသည်။
တရားထိုင်လို့သတိ သမာဓိ နည်းနည်းလေး ကောင်းလာပြီဆိုရင်
ဒီဝေဒနာကိုလည်း သည်းခံပြီး ထိုင်သွားလို့ ရှိရင် ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာ
Endorphin လို့ ခေါ်တဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုး ထုတ်ပေးလာတယ်။
သူ့ စကားက နှစ်လုံးကို ပေါင်းထားတာပါ။ Endogenous morphine
ဆိုတဲ့စကားလုံးပဲနော်။ အပြင်က morphine က operation ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေ ဘာတွေ လုပ်ရတဲ့လူကို ထိုးပေးတာနော်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 10:56 AM No comments:
ငါဟာ သတိကို အိမ်လုပ်ပြီးတော့ နေပါတယ်။
ငါ့မှာ မွေးဖွားခြင်း သေဆုံးခြင်းဆိုတာ မရှိပါဘူး။
ထွက်လေ ၀င်လေကိုပဲ မွေးဖွားခြင်း သေဆုံးခြင်းလို့ 
“ဘုရားရှင်ကို ဖူးတွေ့ လိုလျှင်”
ကိလေသာတွေ ကင်းရှင်းနေတဲ့အခါမျိုးမှာ ဘုရားကို
အာရုံပြုကြည့်ပါ၊ အဲဒီအခါကျမှ ဘုရားဆိုတာ ဘယ်လိုလဲ
ဆိုတာ နည်းနည်းရိပ်မိလိမ့်မယ်။ စာဖတ်ပြီးတော့
သိထားရုံနဲ့ ဘုရားဆိုတာ သိပြီလို့ပြောဖို့ မလွယ်ဘူး။
ဘုရားရဲ့ စိတ်အခြအနေကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကိလေသာကင်းမှ
သိနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်သိနေတာဟာ ကုသိုလ်ဖြစ်နေတာပေါ့။
ခုနှစ်ဆင့်ထိ ပေါက်ထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး၊ တစ်ဖန် ဥဒက ရာမပုတ္တ ဆိုတဲ့ ရသေ့ကြီးက ဈာန်ရှစ်ဆင့်ထိ
အောင် ပေါက်ပြီးသွားတယ်။ အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး နှစ်ဦးဟာ ဘုရားလောင်းရဲ့ ဆရာကြီးတွေပါ။
တန်ခိုးသည် ဖုံးထားရသော အရာ၊ ပညာသည် ဖွင့်ဖော်ထားအပ်...
ကုသိုလ်ကောင်းမှု ပြုလုပ်ပြီး အမျှအတမ်းပေးဝေခြင်းအက...
သားကောင်းရတနာ၊ သမီးကောင်းရတနာတွေ ရအောင် ကိုယ်တိုင်...
*** ၀ိသာခါကို သူ့မိဘများမှာကြားလိုက်သော စကား(၁၀)ခွ...
သာသနာအတွက် ဆိုရေးရှိက ဆိုရပေတော့မည်။